राजनीति – Page 138 – Medianp
नवराज सिलवालले ललितपुर १ बाट उम्मेदवारी दर्ता गरे (फोटोसहित)
NKJUNGप्रकाशित मिति: बिहिबार, कार्तिक १६, २०७४१४:३६
काठमाडौं, १६ कात्तिक । पूर्व डिआईजी नवराज सिलवालले ललितपुर–१ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन् । उनले एमालेका तर्फबाट उम्मेदवारी दर्ता गरेका हुन् । वाम गठबन्धनका तर्फबाट उम्मेदवार बनेका सिलवालले कांग्रेसका उदयशमशेर राणासँग
देश निर्वाचनमय : हर्षाेल्लासका साथ मनोनयन दर्ता (फोटोफिचर)
NKJUNGप्रकाशित मिति: बिहिबार, कार्तिक १६, २०७४१४:१२
काठमाडौं, १६ कात्तिक । दोस्रो चरणमा मंसिर २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि बिहीबार मनोनय दर्ता गर्ने क्रम चलिरहेको छ । सयौं आफ्ना कार्यकर्ताका साथ उम्मेदवारहरुले आफ्नो मनोनयन दर्ता गरेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा
कमल थापाले मकवानपुर–१ मा उम्मेदवार दर्ता गरे
NKJUNGप्रकाशित मिति: बिहिबार, कार्तिक १६, २०७४१३:०७
मकवानपुर, १६ कात्तिक । राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापा मकवानपुर १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने भएका छन् । उनले बिहीबार मनोनयन दर्ता गरेका छन् । यसअघि समानुपातिकाबाट सांसद् बनेका थापा यसपटक भने प्रत्यक्षतर्फबाट चुनाव
रौतहट– ४ मा माओवादीमा किचलो, देवेन्द्र पट्टेललाई बहिस्कार गर्ने निर्णय
NKJUNGप्रकाशित मिति: बिहिबार, कार्तिक १६, २०७४१२:४९
रौतहट, १६ कात्तिक । रौतहट क्षेत्र नम्बर ४मा प्रदेशसभा उम्मेदवारको विषयलाई लिएर नेकपा माओवादी केन्द्रमा किचलो भएको छ । रौतहट–४ को ‘क’मा देवेन्द्र पटेललाई उम्मेदवार बनाएपछि माओवादी केन्द्रमा किचलो सुरु भएको हो । प्रभु साहले पट्टेललाई
सिन्धुलीमा हरिबोल गजुरेल बिरुद्ध आफ्नै पार्टीका बागी उम्मेदवार
NKJUNGप्रकाशित मिति: बिहिबार, कार्तिक १६, २०७४१२:३९
काठमाडौं, १६ कात्तिक । सिन्धुली क्षेत्र नम्बर २ को प्रतिनिधिसभा चुनावमा वाम गठबन्धनका उम्मेदवार हरिबोल गजुरेल आफ्नै पार्टीका नेताले बागी उम्मेदवारी दिएका हुन् । गठबन्धनले गजुरेललाई उम्मेदवार बनाएपछि असन्तुष्ट बनेका माओवादी नेता रामकुमार पौडेलले उम्मेदवारी दिएका
दोस्रो चरण निर्वाचनका लागि कांग्रेसका यी हुन् उम्मेदवार (सूचीसहित)
NKJUNGप्रकाशित मिति: बिहिबार, कार्तिक १६, २०७४११:५६
काठमाडौं, १६ कात्तिक । नेपाली कांग्रेसले मंसिर २१ गते ४५ जिल्लामा हुने प्रतिनिधि र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका उम्मेदवारको नाम टुंग्याएको छ । केही क्षेत्रको बाँकी रहेको भएपनि अधिकांशको भने टुंग्याइसकेको छ । को–कहाँबाट लड्दैछन् चुनाव ?
फेसबुक काण्डले ओखलढुंगामा बाम गठबन्धन धरापमा
NKJUNGप्रकाशित मिति: बिहिबार, कार्तिक १६, २०७४११:३३
ओखलढुंगा, १६ कात्तिक । सर्वोच्च अदालतले व्यक्तिहत्यामा दोषी ठहर गरेका बालकृष्ण ढुंगेललाई प्रहरीले पक्राउ गरेपछि सो बारेमा फेसबुकमा सार्वजानिक भएका धारणाका कारण ओखलढुंगामा बाम गठबन्धनमा असंतुष्टी बढेको छ । बाम गठबन्धनले संचालन गरेको फेसबुक पेजमा नै
ठूला दलले उम्मेद्वार टुङ्गो लगाए
NKJUNGप्रकाशित मिति: बिहिबार, कार्तिक १६, २०७४०९:१५
इलाम, १६ कात्तिक । आगामी मंसिर २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि नेकपा (एमाले) ÷नेकपा (माओवादी केन्द्र)को वाम गठबन्धन तथा नेपाली काँग्रेसले प्रत्यक्षतर्फका सबै उम्मेदवारको टुंगो लगाएका छन् । दलहरूले बुधबार
काँग्रेस बलियो भए मात्र लोकतन्त्र बलियो : अर्थमन्त्री कार्की
NKJUNGप्रकाशित मिति: बिहिबार, कार्तिक १६, २०७४०८:४८
इनरुवा, १६ कात्तिक । अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले काँग्रेस बलियो भएमात्र लोकतन्त्र बलियो हुने बताउनुभएको छ । सुनसरी सदरमुकाम इनरुवामा आज बिहान रासससँग कुराकानी गर्नुहुँदै मन्त्री कार्कीले सो कुरा बताउनुभएको हो । मन्त्री कार्कीले लोकतन्त्रलाई समाप्त पार्नका
माओवादी केन्द्र टुंग्यायो काठमाडौं उपत्यकाको उम्मेदवार, को को परे ?
NKJUNGप्रकाशित मिति: बुधबार, कार्तिक १५, २०७४१७:४६
काठमाडौं, १५ कात्तिक । नेकपा माओवादी केन्द्रले काठमाडौं उपत्यकाका प्रतिनिधि र प्रदेशसभा उम्मेदवारको नाम टुंगो लगाएको छ । माओवादी केन्द्रले वाम गठबन्धनको तर्फबाट काठमाडौंका लागि उम्मेदवार टुंगो लगाएको हो । काठमाडौं १ मा जनार्दन शर्माका भाइ